Global Voices teny Malagasy » Janine Mendes-Franco: Tonga ny GV raha “nalalaka” ny onjam-peo Karibeana tamin’izany andro izany! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jolay 2019 3:57 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Liva Andriamanantena
(Lahatsoratra tamin'ny volana Oktobra 2014)
Ny fotoana voalohany indrindra nahenoako momba ny Global Voices dia tamin'ny alalan'ny bilaogy/rakipeo antsoina hoe Caribbean Free Radio izay i Georgia ilay namako – tale mpitantana ny GV amin'izao fotoana no nanomboka izany. Tamin'izany fotoana izany, David Sasaki izay fantantray rehetra tamin'ny anarana hoe “Oso” no toniam-paritra GV ho an'i Amerika Latina ary nangetaheta ny votoaty Karibeana izy. Tamin'ny taona 2006, mbola vitsy ny olona no nibilaogy avy amin'ny faritra misy anay, ary azo inoana fa tsy nisy ihany koa ny fanatontosana rakipeo ka nahasarika azy noho izany ny Caribbean Free Radio. Nifandray taminay izy rehefa avy nijery ny lahatsoratra nosoratan'i Georgia fotoana vitsivitsy ary nanontany azy raha liana amin'ny fitantarana momba ny faritra Karaiba ho an'ny Global Voices izy. (Nanao izany avy hatrany i Georgia raha tsy diso ny fitadidiako momba izany rehetra izany).
Raha hafohezina ny tantara lava, nanomboka nanoratra sy namoaka lahatsoratra ho an'ny Global Voices i Georgia- saingy nandrisika ahy hanomboka bilaogy manokana izy amin'ny maha-manana vina azy sady maniry hatrany ny hahita ireo namany hitsapa ny fara-fahaizany. Ahafahana manatsara ny fahaizanao hanoratra amin'ny fomba vaovao ny fibilaogiana no foto-keviny. Tsy mila miholakolaka ianao, mila marani-tsaina ary mivantana- satria tokoa mifanamby amin'izao tontolo izao ianao mba hisarihana ny ora vitsin'ny ‘olona amin'ny aterineto .
Nandaitra ny fandresen-dahatra nataony (tsy mahagaga ho an'ireo izay mahafantatra azy izany) ary nanomboka ny bilaogiko aho izay nahatonga ahy ho zatra tamin'ny WordPress mazava ho azy – ka rehefa tonga ny Vovonana GV tany India ary nila olona i Georgia mba hitantana ny GV Karibeana raha tsy eo mandritra ny fotoana fohy izy dia noraisiko izany . Ary nanolo-tena ho mpanoratra aho. Nila olona ny GV mba hameno ny andraikitry ny toniam-paritra ao Karaiba rehefa nandray anjara tao amin'ny ekipa mpitantana i GAP ary tantara ny sisa.
Tena traikefa nahafa-po ahy indrindra ny nidirako ho mpikambana tato amin'ny GV – nihaona tamin'ny olona mahafinaritra avy amin'izao tontolo izao aho izay heveriko ho namana (na dia nihaona tamiko an-tserasera fotsiny aza ny sasany tamin'izy ireo), ary anisan'ireo vondron'olona mavitrika aho izay manampy amin'ny fanovana ny fisian'ny resadresaka manan-danja. Arahabaina nahatratra ny faha 10 taona ry Global Voices!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/06/141126/